वन्दैछ इसाइकरणको उर्वरभूमी–नेपाल – Gandaki Media
कला /सस्कृति विचार/विविध
वन्दैछ इसाइकरणको उर्वरभूमी–नेपाल
Posted on December 31, 2018 Author By admin	Comment(0)
लेखकः विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ
धर्म शब्दको अर्थ खोज्दै जाने हो भने विभिन्न परिभाषा पाइन्छ । “धारयतीति धर्म” भन्ने वाक्यले जसले धारण गर्छ त्यो धर्म हो भन्ने बुझिन्छ । धर्मले व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई चलायमान बनाउँछ । धर्मले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्दै यस लोकमा प्रगतीको वाटोमा लैजान्छ र आत्मोन्नतीको मार्ग दर्शन गर्छ । त्यसरी नै भनिएको छ कि “धर्म एव हतोहन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित” अर्थात धर्मको जसले धर्मको नाश गर्छ त्यसको नाश धर्मले गर्छ भने धर्मको रक्षा गरेमा धर्मले उसको रक्षा गर्छ ।
धर्म भनेको जीवन पद्धति हो । मानिसका जन्म देखि मृत्यु सम्मका संस्कार तथा मान्यताहरु धर्मका आधारमा कायम रहेका हुन्छन्। त्यसकारण धर्म अनुसार संस्कार र रिति रिवाज मात्र नभई जीवन पद्धति पनि फरक फरक हुन्छ ।
“वेदो अखिलो धर्म मूल”ं भनिएको छ । यसको अर्थ– धर्मको मूल वेद हो भन्ने हुन्छ । त्यसकारण वेद वाट निर्देशित कर्म गर्नु धर्म हो भने वेद विरुद्ध धर्म गर्नु अधर्म हो । वेदलाई अपौरुषेय भनिन्छ । अर्थात् वेद कुनै व्याक्तिको देन होइन । वेदको उत्पत्ति रामायणकाल भन्दा धेरै अघि भएको थियो र भारत वर्षमा नै भएको मानिन्छ । त्यसकारण यस भुमण्डलको प्रथम धर्म सनातन धर्म अर्थात हिन्दु धर्म नै हो भन्न सकिन्छ । सनातन धर्मको उत्पत्ति भारत वर्षमा भएको र नेपाल पनि भारत वर्षको अभिन्न अंग मानिएको थियो । शास्त्रहरुमा नेपाललाई तपोभुमी भनेर समेत उल्लेख गरिएका छन् । त्यसकारण नेपालीहरुको जीवन पद्धति, रहन सहन, संस्कार र दर्शन मुलत सनातन धर्म वा हिन्दु धर्ममा आधारीत भएको पाइन्छ। संसारको जुनसुकै भागमा पनि हिन्दु समुदयको वसोबास छ भने त्यहाँ शान्ती, प्रेम, सदभावना, सहिष्णुता, इश्वरको उपासना, आपसी सहयोग जस्ता गुणहरु पाइन्छ । हिन्दु समाजमा घृणा द्धेष हत्या वलात्कार धर्मान्तरण जस्ता कार्य हुदैनन् ।
नेपालमा अधिकाश अर्थात् ८०% भन्दा वढी जनसंख्या हिन्दु धर्मावलम्वी छन् । यसो भएको हुनाले यहाँका जनता शान्ति प्रेमी र सहिष्णु छन् । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा धर्मका नाममा विभिन्न हत्या र हिंसाका घटना हुँदा नेपालमा भने त्यसो हुन पाएको छैन । यसको मुल कारण भनेको हामीले अपनाएको धर्म नै हो ।
यदी कुनै समाजलाई खलबलाउनु छ भने अन्य धर्मावलम्बीले त्यहाको धर्म र संस्कृति माथि प्राहर गर्न गर्दछन् । अहिले विश्वका विभिन्न देशमा इसाइकरणको अभियान डरलाग्दो रुपमा चलिरहेको छ । खासगरी पश्चिमेली राष्ट्रहरुले इसाई धर्मको अनुशरण गरेको हुनाले धनको प्रभाव देखाएर वा कुटनैटिक प्रयास वाट होस मानिसहरुलाइ इसाई धर्मममा धर्मान्तरण गर्ने र त्यस देशलाई अप्रत्यक्ष रुपमा आनो प्रभाव क्षेत्रमा पार्ने प्रयास भइरहेका छन् । यस कार्यमा युरोपेली मुलुकहरु वढी मात्रामा सकृय रहदै आएको पाइन्छ ।
नेपाल विश्वका अति गरिव राष्ट्रमा पर्दछ । यहाँका करीव २५% जनता निरपेक्ष गरीवी रेखा मुनिको स्थितिमा जीवनयापन गर्न वाध्य हुनु परेको छ । विश्वका गरिव मुलुकहरुमा इसाइकरण को धन्दा वढी चलिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिलाई धर्म परिर्वतन गराउने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता काममा इसाई धर्मसँग सम्बन्धीत एनजीओहरु सकृय भएको पाइन्छ । आपतविपतको वेला सहायता वाड्ने नाममा धर्म प्रचार गर्ने र धार्मिक रुपान्तरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा मल्लकालमा गोप्य रुपमा प्रवेस गरेका इसाई प्रचारकलाई पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरी साहसिक कार्य गरेका थिए । तर देशमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भइ संविधान र ऐन कानुन समेत परिर्वतन हुन्छ । धर्मान्तरण को विषयलाई खुकुलो वनाइसकेको हुँदा २०४६ साल पछि नेपाल इसकाइकरणको उर्वर भुमि हुन गएको छ । विश्वका गरिव राष्ट्रहरु जस्तै रुवाण्डा, वुरुण्डी, कंगो, भियतनामा, इथीयोपिया, सुडान, केन्या चाड आइभोरी क्रोष्ट, जस्ता देशहरुमा इसाइकरणले तिव्र गति लिएझै नेपालमा प्रति वर्ष १०.२२ प्रतिसतका दरले क्रिश्चियन धर्ममा रुपान्तरण भइरहेको पाइन्छ । हाल हाम्रो देशमा करीव १२ हजार चर्च रहेको र ३० लाख भन्दा वढी क्रिश्चीयन धर्मावलम्बी रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालका इसाइ संगठनहरुको दावी अनुसार इसाई धर्मावलम्वीहरुको संख्या द्रूत गतिमा वढाउने उद्देश्यले काम भइरहेको वताइएको छ । त्यति मात्र नभई राज्यका संयन्त्रहरु जस्तै संसद, स्थानिय निकाय, प्रशासनिक निकायहरुमा पनि सो धर्मावलम्बीहरुको उपस्थिति कायम गरी निति निमार्ण मा पनि भुमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।
संविधानमा नै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएपछि देशमा धर्मान्तरणको प्र्रकृयाले तिव्रता पाएको हो ८०% भन्दा वढी जनसंख्या हिन्दु भएको यस देशमा धर्म निरपेक्षता को प्रश्न कसरी आयो र रातारात देशलाई धर्म निरपेक्ष भनेर कसरी घोषणा गरियो भन्ने कुरा शंकाको घेरन भित्र छदै छ ।यस भित्र विदेशि संयन्त्र को घुसपेट देखि लिएर विदेशी पैसाका मोटो रकमको चलखेल भएको खवरलेखहरु यत्रतत्र नछापिएका पनि होइनन् ।
नेपाल हिन्दु रज्य हुँदा देशका सबै जनताले आ–आनो धार्मिक आस्था अनुसार उपासना गर्न र रिती रिवाज पालना गर्न कुनै समस्या थिएन विश्वमा एकमात्र हिन्दु राज्य भनेर नेपाललाई चिनाइन्थ्यो। त्यस वेला अहिलेको जस्तो खुल्लमखुल्ला धर्मान्तरण गर्नमा प्रतिवन्ध थियो ।
धर्म मान्ने कुरा व्याक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रश्न भएतापनि लोभलालचा डर त्रास देखाएर धर्मान्तरण गर्नु कानुनी रुपमा दण्डनिय मान्नु नभएर अमानविय कार्य हो । अहिले हाम्रो देशमा मात्र नभएर गरिव राष्ट्रमा धर्मान्तारण जुन प्रकृया चालिरहेका छन् ती मुलत लोभ लालचा कै भरमा भएका देखिन्छन् । यतिमात्र नभइ “प्रभु क्राइष्ट” को प्राथना गरेमा रोग संचो हुने मात्र नभई व्याक्तिगत समस्या पनि समाधान हुने झुठो प्रचार गरिएको छ ।
हाल अन्य देशमा झै नेपालमा पनि प्रोटेष्टेन्ट र क्याथोलीक चर्च रहेकोमा चर्च अफ क्राइष्ट, सेभेन्थ डे, याहोवा साक्षी, ओन्ली जिसस र मुन सम्प्रदाय समेत सकृय रहेको देखिन्छ । मुन सम्प्रदाय अन्तरगतका सचाई नामको कार्यक्रमले मानिस हरुलाई झुक्याउने र विस्तारै इसाइ धर्ममा रुपान्तरण गर्ने काम व्यापक रुपमा भइरहेको जन गुनासो सुनिन्छ। त्यस सम्प्रदायमा लागी प्रार्थना गरेमा व्यावसायमा प्रगती रोग निको हुने विदेशमा जान भिसा लाग्ने मुद्दा मामिलामा विजय हुने जस्ता कपोलकल्पीत प्रचार गएिका पनि सुनिन्छन् । यसरी हुनै नसक्ने कुराको अफवाह फैलाएर गाउँ गाउँ र टोल टोलमा धर्मान्तरण गरी हिड्दा समेत न त सरकारलाई चासो छ न त जन प्रतिनिधीलाई नै । वरु उल्टै सरकारमा पदासिन व्याक्ति र जन प्रतिनिधि नै प्रमुख अतिथिको आसनमा विराजमान हुन पुगेको तत्थ्य देखिन्छ ।
हालै युनिर्भसल पिस फेडरेसन नामक क्रिश्चियन संस्थाको आयोजनामा एसिया प्यासिफिक समिट २०१८ को आयोजना काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । उक्त समिटमा नेपाल वाट प्रधानमंत्रीको तह वाट नै प्रतिनिधित्व भयो भने नेतृत्वको प्रथम पंक्तिमा पर्ने व्याक्तित्वहरुको पनि सकृय सहभागीता रहेको पाइयो । उक्त समितिमा सरकारी संमयन्त्रको पनि व्यापक रुपमा प्रयोग गरियो ।
युनिभर्सल पिस फेडरेसन विवादित संस्थाको नाममा परिचित छ । उक्त संस्थाका संस्थापक मुन लाई अमेरिका वेलायत जापान उत्तर कोरीया जस्ता देशहरुले दण्डीत गरेको र हाल उनकै पत्नी हाकजा हान्मुन ले क्राइष्टकी छोरी भनेर स्वयं घोषणा गरी संसारभर क्राइष्टको साम्राज्य खडा गर्ने र यस सिलसिलामा नेपालमा पनि प्रभु को राज्य खडा गर्ने विचारले प्रभावित भई कार्यक्रम संचालन गरेको देखिन्छ । क्राइष्टकी छोरी भनेर अनर्गल प्रचार गरिएकी र क्रिश्चियन धर्मका मुलधार क्याथोलीक र प्रोटेष्टोर सम्प्रदाय वाट तिरस्कृत गरिएकी मुन वाट आर्शिरवाद लिन नेपालमा साम्यवादी विचार राख्ने नेताहरु समेत अघि सारेको देख्दा नेपालमा वहु संख्यक हिन्दु धर्मावलम्वीहरु प्रति भित्रभित्रै षड्यन्त्र त भइरहेको छ कि भनी आशंका गर्नु अस्वभाविक होइन।
नेपालको आर्थिक विपन्नता र अशिक्षालाइ मुल आधार वनाएर इसाई समुदायले यस देशलाइ धर्मान्तारणको उर्वर भुमिका रुपमा एकातिर प्र्रयोग गरिरहेका छन् भने अर्को तिर समाजमा रहेको आपसी प्रेम सद्भावना र सहकार्यमा पनि खलल पर्न गएका छन् । समाजमा इसाइ कारणले गर्दा विवाह व्रतवन्ध काजक्रिया अन्तिम संस्कारहरुमा विवाद तथा झैझगडाको परिस्थीती उत्पन्न हुन थालेको छ । जतिजति धर्मान्तरण को गति वढ्दै जान्छ त्यति त्यति नै यस्ता समस्याहरु वढ्दै जानि खतरा वदछ र कालान्तरमा समाजमा अशान्ति द्धेष कलह वढ्न गई द्धन्दको रुप लिन सक्छ । अफ्रिकि मुलुकहरु रुवाण्डा, यमन, हाइटी जस्ता देशहरुमा धार्मिक सम्प्रदाय नै युद्धका कारणले लाखौं को ज्यान गएको घटना धेरै भएको छैन । ती देशहरुमा पनि इसाइकरण नै युद्धको मुख्य कारण भएको मानिन्छ ।
कुनै पनि शान्ती प्रीय देशलाई खलवल पु¥याएर द्धन्दको स्थितिमा पु¥याउने र सहायताको नाममा इसाइ धर्मको प्रचार गर्ने निति नेपालमा पनि विजारोपरण भएको देखिन्छ । देश हाक्ने पाटी नेता तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले यस्ता कुराहरुमा विचार नपु¥याई व्याक्तिगत स्वार्थमा लागि नेपाली नेपाली विच द्धन्द वढ्ने र त्यसले गर्दा नेपालका अस्तित्व नै धरामा पर्ने भएकाले यस तर्फ वेलैमा सवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
मनोरन्जन रोचक विचार/विविध विश्व
मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ? जानी राखौ…!
पाठेघरमा बच्चा बस्न वा गर्भरहन थुप्रै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब -(अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी […]
कला /सस्कृति ग्यालरी मनोरन्जन
किन हात झिकिन् निरुताले ‘लभ स्टेशन’बाट , कारण यस्तो
Posted on October 2, 2018 Author By admin
मुम्बइमा रहँदै आएकी नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका निरुता सिंहले काम गर्ने पक्का भएको एक चलचित्रबाट हात झिकेकी छिन् । उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशनमा अहिले दार्जिलिङ्गमा छायांकन भैरहेको चलचित्र ‘लभ स्टेशन’बाट निरुताले हात झिकेकी हुन् । गोविन्द शाहीको निर्माणमा गत शुक्रबारदेखि यो चलचित्रको छायांकन सुरु भएको छ । ५० दिनको सेड्यूलसहित यसको निर्माणपक्ष भारत लागेको हो । […]
कला /सस्कृति मनोरन्जन
Posted on February 1, 2019 Author By admin
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित कलाकार बीएस राणाको निधन भएको छ । उनको उपचारको क्रममा काठमाण्डौको टिचिङ अस्पतालमा निधन भएको चलचित्र कलाकार संघकी महासचिव सरिता लामिछानेले जानकारी दिइन् । राणाको केही समयदेखि बिरामी थिए । राणाको ७८ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उपचारको क्रममा उनको मुटुमा पनि समस्या देखिएको थियो । उनले अभिनय गरेको पहिलो […]
दोस्रो नेपाल आइडल हुन सफल रवि ओडलाइ मातृ शोकः करेन्ट लागेर आमाको मृत्यु
चिकित्सक संघले आजबाट आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने